Zviitiko hazvibvumirwi chete ne Prepar3D v4. Ndinowana mhosho yemashoko paunotanga P3D - Rikoooo
Mibvunzo pamusoro simulators uye wedzera-wanda
Zviitiko hazvibvumirwi chete ne Prepar3D v4. Ndinowana mhosho yemashoko paunotanga P3D
Vashandi veEprepar3D v4 itsva: Kutevera charset inoshanduka mu Scenery.cfg kune UTF-16LE vatsigiti havagoni kubvumira nzvimbo yako nekutsvaga.
Mhinduro Yenguva Duku: Vhura faira C: \_ ProgramData \_ Lockheed Martin \_ Prepar3D v4 wozarura faira Scenery.cfg ne Notepad uye chefa File - Save As ... Muhwindo rinotanga sarudza UTF-8 mundima yekunyora (ona mufananidzo pasi) uye chengeta Save.
Dzorera zvakare nzvimbo uye voila.
Izvi zvinogadziriswa zvinodzokororwa kune imwe nzvimbo yekugadzirisa nzvimbo nokuti P3D inochengetedza zvakare Scenery.cfg file mu UTF-16LE mushure mekuvhara kwega rimwe nerimwe.
Mifananidzo yakawedzerwa mushure meSeptember 6, 2017 haibatsirwi neiyi nyaya.
Tirikuvandudza iyo inogadzirisa mukana wega yega yega, dambudziko richagadziriswa munguva pfupi, asi rinotora nguva.
musi weSvondo September 07 by rikoooo